Buy Web Essentials Course (100,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Htet Htet Lin
Web Essentials Course - (Weekends Class) - July လ တန်းခွဲသစ် (7.7.2018) ရက်နေ့စမည်။
ရန်ကုန်မြို့ တွင် Web Essentials သီးသန့် တက်ချင်သူများ (7.7.2018) ရက်နေ့ တွင် Weekends Class လှည်းတန်း ဇေယျာသီရိလမ်း Myanmar IT Consulting သင်တန်းကျောင်းခွဲတွင် ဖွင့်ပါမည်။
#သင်တန်းကြေး ၁ဝဝ,ဝဝဝ ကျပ်။
#သင်တန်းကာလ ၂ လခွဲသင်တန်း။
#သင်တန်း ချိန် - ( 10:00 AM to 12:00 PM) .
ကွန်ပျူတာနည်းပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် IT ပိုင်းစိတ်ဝင်စား ပြီး Web Developer အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရပ်တည်လိုသောလူငယ်များအတွက် Website တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သော အခြေခံများကို သင်ကြားပေးသည့် Web Essentials သီးသန့်Weekends Training ( July Class) - လှည်းတန်းမှာဖွင့်ပါပြီ။
#( စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ တစ်ပတ် ၂ ရက် - ၂ လခွဲသင်တန်း (7.7.2018)
(စနေ နေ့) စမည်။
Website များရေးသားခြင်းကို လေ့လာသင်ယူပြီး IT Company များတွင် Frontend Developer အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်လိုသူများအတွက် Myanmar IT Consulting မှ Web Essentials Training စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Weekends Class A : ( 10:00 AM to 12:00 PM) . တစ်ရက်2နာရီ ဖြစ်ပြီး ၂လခွဲ တက်ရောက် ရပါမည်။
တန်းခွဲ တစ်ခုတွင် သင်တန်း သားဦးရေ ၁၀ ဦး သာ ကန့်သတ် သင်
ကြားမည်ဖြစ်ပြီး Web Development Company တွင် လုပ်ကိုင်နေသော နည်းပညာ အတွေ့ အကြုံ ရှိ ဆရာ ဆရာမ များမှ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီး ဆုံးပါက မိမိရေးသားထားသော Project များကို Online ပေါ်တွင် တင် နိုင်သည် အထိ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။
သင်တန်းကြေးမှာ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ( တစ်သိန်း) ကျပ်တိတိ ဖြစ်ပါသည် ။
ဘာသာရပ် စုစုပေါင်း (6) ဘာသာ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
#Web Essentials Course တွင်
6.Bootstrap4 and Responsive Web design project
သင်တန်း ပျက်ရက် ( ၃) ရက် မကျော် မှသာ Certificate ပေးမည်ဖြစ်ပါ
သင်တန်း အပ်နှံ လိုပါက Myanmar IT Consulting - တိုက်အမှတ် (29 A/ 5A ) ၊ New Day Copy အပေါ်ထပ် ၅ လွှာ ၊ လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီ အင်းစိန် လမ်းကြီးဘေး ခိုင်ရွှေဝါလမ်း လှည်းတန်း ရန်ကုန်မြို့ သို့လူကိုယ်တိုင် လာရောက်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ် ဆွေးနွေး မေးမြန်း စုံစမ်းလိုပါကလည်း Myanmar IT Consulting Phone: 09 77 2750502 / 09 772750503 / 09 772750504 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
အမည်: Web Essentials Course